Sidee Baa Runta Kitaabka Quduuska ah Dib Loogu Helay?
Ardaydii Kitaabka waqtigii 1870
Daabacaaddii ugu horreysay oo majalladdeenna sanadkii 1879
Kitaabku wuxuu sii sheegay Ciise markuu dhintay kaddib inay macallimiin been ah ka dhex kici doonaan Kirishtaankii hore oo ay kharribi doonaan runta Kitaabka. (Falimaha Rasuullada 20:29, 30) Waqti kaddib sii sheegiddan way rumooday. Macallimiintan beenta ah tacliintii Ciise waxay ku qaseen fekradaha kuwo wax kale caabudo. Markaasna Kirishtaannimo been ah baa bilaabtay. (2 Timoteyos 4:3, 4) Maanta sidee baan u hubi karnaa inaan si saxan u fahamnay wuxuu Kitaabku ina baro?
Waxa yimid waqtigii uu Yehowah runta muujin lahaa. Yehowah wuxuu sii sheegay ‘waqtiga ugu dambaysta aqoonta [runta ah] way kordhi doontaa.’ (Daanyeel 12:4) Sanadkii 1870 koox yar oo runta raadinaya ayaa gartay in kiniisado badan tacliimo aan Kitaabi ahayn haystaan. Sidaas daraaddeed waxay ku dadaaleen inay gartaan tacliimihii Kitaabka oo asalka ahaa oo Yehowah wuxuu ku barakeeyay fahmid iyo aragti.
Niman daacad ah ayaa Kitaabka si fiican u bartay. Habkii waxbarashada Ardaydii Kitaabka oo naga horreeyay baan maanta weli isticmaalnaa. Kitaabka xabbad xabbad ayay u dhigteen. Markay la kulmaan aayad ay fahmiddeedu adag tahay waxay raadin jireen aayad kale oo ay ku micneeyaan. Markay micno aayadahoo dhan waafaqsan helaan way qori jireen. Sidaas daraaddeed waxay oggolaadeen inuu Kitaabku isfasiro waxayna dib u heleen rumihii ku saabsanaa magaca Ilaahay iyo Boqortooyadiisa. Waxayna ogaadeen xaaladda kuwii dhintay, rajada sarakicidda iyo ulajeeddadiisa ku saabsan adduunka iyo binuʼaadanka. Baadhitaankoodii wuxuu ka xoreeyay rumaysad iyo caadooyin badan oo been ah.—Yooxanaa 8:31, 32.
Sanadkii 1879 Ardaydii Kitaabka waxay garteen inuu waqtigii runta la faafin lahaa yimid. Sanadkaas waxay bilaabeen inay soo saaraan majalladda aan maanta weli isticmaalno. Hadda runta Kitaabka waxaan la qaybsanaa dad 240 waddammo ku nool oo 750 oo luqadood ayaan ku turjumnaa. Aqoonta runta ah sidan oo kale weligeed u ma ay kordhin!
Markuu Ciise dhintay kaddib maxaa ku dhacay runta Kitaabka?
Maxaa inoo suuraggeliyay inaan dib u helno runta ku jirta Erayga Ilaahay?
Wadaag Wadaag Sidee Baa Runta Kitaabka Quduuska ah Dib Loogu Helay?